Waxqabadka 'Sen Sen trams tram service' (Fiidiyow) | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulTababarka Waxaad carqaladeyneysaa tayada ficilka (Video)
14 / 02 / 2015 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka, VIDEOS
Ficilkii Waxbarashada Sen wuxuu joojiyay adeegyadii taraamyada: Waxbarashada xubnaha xubnaha Sen oo isugu soo baxay fagaaraha Beyazıt waxay ka mudaaharaadeen joojinta fasalada diimeed ee khasabka ah iyo in iskuulada qaar loo rogo iskuulada imaamka.
Socodka kooxda ee wadada lugta ayaa sababay carqalado. Qeybta waxbarashada ee Sen Istanbul iyo wakiilo kala duwan oo aan dowli ahayn ayaa ka mudaaharaaday joojinta waxbarashada diimeed ee khasabka ah. Dadka 500 ayaa isugu soo baxay fagaaraha Beyazıt waxayna ku socdaan halqabsiyo. Booliisku waxay qaadeen talaabooyin nabadgelyo oo balaaran sababta oo ah falka. Intii lagu gudajiray waqtigan, ayaa duulimaadyada qaar hakad la geliyay sababtuna ay tahay inay ku socdaan khadka tareenka. Guushii kooxdu waxay ka soo hor martay Agaasime waaxeedyada Waxbarashada Qaranka. Hüseyin Özer, Xoghayaha Türk Eğitim-Sen Branch, oo bayaan ka soo saaray kooxdan, ayaa yidhi, düşman Sannadkii la soo dhaafay, 12 wuxuu kordhay in ka badan abid taariikhda siyaasadaha iyo cilmiyada ka hortagga sayniska ee la hirgaliyay gaar ahaan nidaamka waxbarashada oo gebi ahaanba ka soo horjeedda sayniska barbaarinta. Waxbarashada dugsiga ka horeeya, nidaamka waxbarashada ilaa jaamacadaha waxaa loo maamulaa iyada oo la raacayo qawaaniinta diinta iyo tixraacyada si joogto ah loogu xadgudbo awoodda iyada oo la iska indhatirayo xaqiiqada aasaasiga ah ee caalamiga ah ee sayniska. ”
Isaga oo ku andacooday in xukunkii maxkamada xuquuqul insaanka yurub (AHİM) la iska indhatiray, Özer wuxuu yidhi, “maxkamada xuquuqul insaanka yurub waxay xukuntay in koorsada diinta khasabka ahi ay xadgudub ku tahay xoriyada diinta iyo damiirka, laakiin inkasta oo go'aanada garsoorka, hadana talaabooyinka lama huraanka ah wali la qaadin. Turkey ee manhajka ee fasalada diinta khasab ah in sano iskuulka sharciyada ee Islam ee Sunni-Xanafi. Sidaa darteed, maahan in diimaha oo dhan iyo waxa ay rumeysan yihiin lagu soo bandhigo ardayda masaafada isku midka ah. Xaaladdaani waxay horseedaa takoor iyo dhaqan ka-saarid gaar ahaan Alevi iyo ardayda aan Muslimka ahayn ee dugsiyada. ”
Saidzer wuxuu yiri, suuragal ma ahan in nidaam waxbarasho oo aan cilmaani aheyn inuu noqdo mid dimoqraadi ah iyo mid cilmiyeed, inuu u adeego halganka dimuqraadiyadda, sinnaanta iyo xorriyadda, iyo in shaqsiyaadku si xor ah ugu noolaadaan waxa ay rumeeysan yihiin oo aan cadaadis la saarin. Waxaan ugu baaqayaa awooda siyaasadeed in lagu soo afjaro kala qeybsanaanta bulshada iyada oo loo marayo kala duwanaanshaha xagga diinta, luuqada, dariiqa iyo aqoonsiga, isla markaana si deg deg ah loo joojiyo caqiidada, cilmiga, cilmiga iyo cilmiga barashada afka hooyo. ”
Kooxda ayaa si qarsoodi ah u kala dirtay kadib war-saxaafadeedka.
Wadada Pantolonze Metro Journey waxaa la dhisay (Photo Gallery-Video)
War saxaafadeed ka soo Baxay Tv-ga Tv-ga Shabakada
Kooxda Nabadgalyada Tareenka ee SAMULAŞ habeenkii
Maydhayaasha elektarooniga ah oo laga sii daayay xaruntii Istanbul-Konya YHT